DBGHELP.DLL ကို DOWNLOAD လုပ်ပါ - DLL - 2019
အတန်းဖော် - ဤအင်တာနက်ရုရှားအစိတ်အပိုင်းအတွက်ရေပန်းအစားဆုံးလူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်လုံးဝအတူတကွ data အားလုံးကိုအတူ Odnoklassniki မှာသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖျက်ပစ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, developer များနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖယ်ရှားခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း - ခြေရင်းတဦး, များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်အစဉ်အမြဲဒီ feature detect မရနိုင်ပါ။ developer များအများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေတဦးတည်းသော site ကိုပေးသာနည်းလမ်းနှစ်ခု။
နည်းလမ်း 1: "စည်းကမ်းများ"
ဆိုက်၏လက်ရှိဗားရှင်းမှာတော့ - နီးပါးကို 100% ရလဒ် (ကျရှုံးခြင်းဟာအလွန်ခဲဖြစ်ပျက်ပေမယ်) အာမခံပေးသော, သင့်စာမျက်နှာကိုဖျက်ပစ်ရန်အသုံးအများဆုံး, လုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီနည်းလမ်းကို Odnoklassniki developer များသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။
စတင်ရန်သင်သည်သင်၏ entry ကိုမစီမံကြပါလျှင်အဖြစ်, သင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဘာမှမပွုနိုငျ, သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာသို့ဝင်ပါ။
ဆိုက်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်, အဆုံးမှ scroll ။ အပိုင်း၏ "ထည့်သွင်းမှုများ" ဒါကြောင့်လျော့နည်းသတင်းအချက်အလက်အရပ်၌ကြောင့်, အခြားကဏ္ဍများအတွက်သွားကြဖို့အကြံပြုသည်, ကတက်ကြွစွာ updated လျက်ရှိသည်အထူးသဖြင့်လျှင်, လုပ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အပိုင်းအတွက် "ဓာတ်ပုံ", "သူငယ်ချင်းများ", "မှတ်စုများ"။ ကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုရွှေ့ "ထည့်သွင်းမှုများ" optional ကို, ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေဘို့အကြံပြုခဲ့သည်။
လက်ျာဘက်၌ဆိုက်၏အောက်ဆုံး, စာစောင်ကိုမှာ "စည်းကမ်းများ"။ စည်းကမ်းကြောင့်အချက်အလက်များ၏ညာဘက်အစွန်ဆုံးကော်လံတွင်တည်ရှိသည်။
သင့်အနေဖြင့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူစာမျက်နှာ redirect ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့အောက်သို့ဆွဲချ, အဲဒီနောက်မီးခိုးရောင် link ကိုနေရာချထား "ဝန်ဆောင်မှုများကိုငြင်းဆန်ရန်".
သေချာပေါက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အောက်ခြေမှာအထူး box ထဲမှာသင့်ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်ခိုင်လုံသော password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်စာမျက်နှာဖယ်ရှားခြင်းများအတွက်အကြံပြုအကြောင်းပြချက်များထဲမှသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကဝန်ဆောင်မှုပိုကောင်းအောင် developer များကကူညီသင့်ပါတယ်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြည့်စွက်ရန်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကိုဖျက်"။ စာမျက်နှာမရှိတော့ချက်ချင်းသောနောက်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်, သင်မူကားဖယ်ရှားရေး၏နေ့စွဲကနေ3လအတွင်းက restore နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုတွဲခဲ့သော re-ကိုအသုံးတဲ့ဆဲလ်နိုင်တော့မည်ပေမယ်သာသုံးလအကောင့်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးနောက်ပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 2: အထူးရည်ညွှန်း
ဒါဟာလျော့နည်းသိသာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူးတချို့အကြောင်းပြချက်က backup လုပ်ထားအတိုင်းဤသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်လျှင်။
သင့်ရဲ့အကောင့်ကို Log ။ ချက်ချင်းသည်၎င်း၏အမည်ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကပရိုဖိုင်းကိုဆက်တင်များသို့သွား logging ပြီးနောက်။
ယခုလိပ်စာဘားသောစာမျက်နှာ၏ URL-လိပ်စာအာရုံစိုက်။ ဒါဟာအောက်ပါကဲ့သို့အရှာဖွေသင့်ပါတယ်:စနစ်အတွက် //ok.ru/profile/(nomer ပရိုဖိုင်းကို)။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုပြီးနောက်သင်ကထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်:
ဤသည်ကစာမျက်နှာကိုဖယ်ရှားဖို့တောင်းပါလိမ့်မည်ရှိရာပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ သင်သည်သင်၏ account ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုဖယ်ရှားရန်, နှင့်တူသော button ကို click လိုက်ပါ။ ထို့အပြင်သင်ပရိုဖိုင်းကိုပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်း / အကြောင်းရင်းများမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Error . Survivor Royale Solucionado 2018 (အောက်တိုဘာလ 2019).